Linux Mint 20 iri pano uye idzi ndidzo dzinonyanya kukosha nhau uye shanduko | Kubva kuLinux
Pakati pevhiki ino kuvhurwa kweshanduro nyowani yeakakurumbira Linux kugovera "Linux Mint 20" yakaunzwa, iyo inouya nenhamba huru yeshanduko nenhau, pamwe nenyaya yekuti iyi vhezheni itsva yakavakirwa paUbuntu 20.04 LTS.
Kune avo vasati vajaira kugoverwa, iwe unofanirwa kuziva kuti inowirirana zvakazara neUbuntu, asi inosiyana zvakanyanya munzira yekuronga yemushandisi interface uye nesarudzo yekusavimbika kunyorera.
Linux Mint vagadziri vanopa dhairekitori nharaunda inoenderana neyekutanga canon edesktop sangano, iro rinozivikanwa zvakanyanya kune vashandisi vasingagamuchire nzira nyowani dzekugadzira iyo GNOME 3 interface.
Nhau huru muLinux Mint 20
Pamanyaya makuru eiyo vhezheni nyowani tinogona kuwana izvo Linux Mint 20 "Ulyana" inotora hwaro hweUbuntu 20.04 uye inosanganisira iyo Linux kernel 5.4, iyo ine vhezheni iyo ichave iine zvigadziriso uye tsigiro kusvika 2025.
Kunyangwe zvakakosha kutaura izvozvo Snap uye Snapd vanobviswa pakuendesa, uye otomatiki kumisikidza Snapd pamwe nemamwe mapakeji akaiswa kuburikidza neAPT inorambidzwa zvakare. Kunyangwe, kana zvichidikanwa, mushandisi anogona kuisa snapd nemaoko, asi kuiwedzera nemamwe mapakeji pasina ruzivo rwemushandisi zvakarambidzwa.
Imwe shanduko ndeyekuti inovaka makumi matatu nematatu x86 masisitimu akamiswa. SaUbuntu, kugovera iko iko kwanowanikwa chete pane makumi matanhatu nemasere-masisitimu.
Kune vhezheni dzeMATE 1.24 neCinnamon 4.6, dhizaini uye kurongeka kwebasa iro iro pfungwa dzeGNOME 2 dzinoramba dzichikurudzira dzinojekeswa.
Kana zvakadaro iyo Cinnamon vhezheni Linux Mint, inosanganisira Cinnamon 4.6 ikozvino ndinoziva inotsigira kuyera chikamu, ichikubvumidza iwe kuti usarudze akakwana saizi yezvinhu pachiratidziro cheyakakura pixel density (HiDPI), semuenzaniso, iwe unogona kuwedzera iyo inoburitsa interface zvinhu zviri 2 nguva uye 1,5.
kunze kwaizvozvo basa rakaitwa pakuona yakagadziridzwa kodhi kuita kwe gadzira zvigumwe mumaneja wefaira the nemo. Thumbnails izvozvi zvinogadzirwa asynchronously, uye zvigunwe zvigoiswa neakaderera kukoshesa pane dhairekita kufamba.
Wakawedzera iyo kugona kusarudza skrini yekuvandudza mwero uye nerutsigiro rwekupa zviyero zvaro zvega chega cheki, icho chinogadzirisa dambudziko nekushanda kana uchibatanidza chenguva dzose yekutarisa uye HiDPI.
Kazhinji zvekugovera, izvozvi chinhu chitsva cheWarpinator chinosanganisirwa kuchinjanisa mafaera pakati pemakomputa maviri pane network yemuno, uchishandisa encryption yekufambisa data.
Uyewo, rutsigiro ruzere rweiyo Inoda-Dhizaini yakaitwa, iyo painogoneswa, nekutadza, lseIntel GPUs zvinoshandiswa kupa muchikamu, uye iyo menyu yekushandisa inopa kugona kumhanyisa chirongwa chega chega uchishandisa iyo NVIDIA GPU.
Iko kugona kwe kubata mbeva vhiri mupumburu zviitiko zvakawedzerwa kune XappStatusIcon applet uye basa nyowani rakafanana ne gtk_menu_popup () rave kuitwa, izvo zvinoita kuti nyore kuchinjisa kwekushandisa neGtkStatusIcon.
Applets Blueberry, mintupdate, mintreport, nm-applet, mate-simba-maneja, mate-media, redshift uye rhythmbox dzakashandurwa kushandisa XAppStatusIcon, iyo yaibvumidza kupa iyo system tray kutaridzika kutaridzika.
Zvose edhisheni (Cinnamon, MATE uye Xfce) akabatanidza mifananidzo yakawanda mune systray, ivo vakawedzera mifananidzo yekufananidzira uye vakaita rutsigiro rwepikisheni yakakura yekuratidzira (HiDPI).
Mune iyo Xed zvinyorwa edhita rutsigiro rwakawedzerwa kumatanho ekubatanidza uye kubvisa mitsara isina chinhu usati wachengeta iyo faira.
MuXviewer, mabhatani akawedzerwa kune iyo paneru kuti uchinjire kuzere skrini mode uye kuratidza hombe fomati slide show. Iko kuchengetwa kwekuvhura hwindo mune yakazara skrini kunopihwa.
Mune Xreader gwaro rinoona, bhatani rekudhinda rinowedzerwa pane iyo pani.
Iyo Gdebi interface yakagadziriswa zvachose, zvinoshandiswa kuvhura uye kuisa madhiri mapakeji.
Nyowani yeyero dhairekitori mifananidzo yakawedzerwa.
Mune inogamuchirwa login interface, mushandisi anobvunzwa kuti asarudze chirongwa chevara.
Wakawedzera rutsigiro rwekutambanudza iyo yepashure mufananidzo pane akawanda monitors kune iyo login screen (Slick Greeter).
Apturl yachinja iyo backend kubva kuSynaptic kuenda kuAptdaemon.
MuAPT, yemapakeji achangobva kuisirwa (kwete ezvekuvandudzwa), kuisa mapakeji kubva kuchikwata chakakurudzirwa kunokurudzirwa nekutadza.
Pakutanga chikamu chenguva pfupi chinomhanya VirtualBox, iyo resolution yechiso inogadzirirwa kusvika ingangoita 1024 × 768.
Mamwe ruzivo uye kurodha pasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Linux Mint 20 iri pano uye idzi ndidzo dzinonyanya kukosha nhau uye shanduko
Kuisa Snap, chingobvisa faira: /etc/apt/preferences/nosnap.pref
Kuisa chromium: https://linuxmint-user-guide.readthedocs.io/en/latest/chromium.html
Pindura kune logan
Pindura kune huturu
uye kubva kuhope hachina chinhu?
Pindura ku gatto
Hashcat 6.0.0 inouya ne51 nyowani algorithms uye nezvimwe